Ordu waxay yareynaysaa Loadadka Gaadiidka Xadka Isku-xirka Magaalo-Weyne | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasOrdu waxay yareynaysaa Loadadka Gaadiidka Xadka Isku-xirka Magaalo-Weyne
24 / 03 / 2020 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, TURKEY
ciidanku waxay yareeyaan xamuulka taraafikada ee isgoysyada waaweyn ee magaalada
Xaaladda guud, shaqooyinka ay bilawday oo ay dhammaystirtay Dawladda Hoose ee Magaalooyinka Waddada isku-xirta ee degmada Altınordu waxay ka sii soconaysaa Sivas Crossroad. Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, oo maalin iyo habeenba ku qabata shaqada qandho ee wadada dhinaceeda, ayaa ujeedkeedu yahay in la dardar galiyo isu socodka gaadiidka magaalada isla markaana la dhimo cufnaanta taraafikada marka la dhammaystiro shaqooyinkeeda.
“WAAN KA HORJEERNAANNAAN SHAQADAAN KU SAABSAN YAHAY SHAQAALAHA KU SAABSAN SHAQADA”
Isagoo cadeeyay in cufnaanta taraafikada magaalada ay hoos u dhici doonto muwaadiniintuna ay si raaxo leh ugu safri doonaan, Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu Coşkun Alp ayaa yiri, “Waxaa gobolka ka dhacay rar culus oo gaadiid. Laga soo bilaabo waqtigii aan xafiiska la wareegnay, Duqa Magaalada ee Dawladda Hoose, Dr. Mehmet Hilmi Güler ayaa na baray arinkan oo bilaabay inaanu la shaqayno kooxdeena. Dareenkaas, waxaan bilownay daraasaddeena mashruuca waxaanan qorsheysanay meesha iyo waxa la sameeyo. Markii horeba, waxaan bilownay inaan ka shaqeyno Isgoyska degmada waxaanan xallinay dhibaatada taraafikada ee sicirka. Kadib waxaan bilownay inaan ka shaqeyno Isgoyska Sivas Junction. Halkaas waxaa ka jiray gaadiid aad u daran oo gaadiidleyda ah halkaas oo mararka qaar sababa shilal. Shaqada aan qaban doonno, waxaan hubin doonnaa in taraafikada ay si dhakhso ah u qulqulaan oo muwaadiniinteenuna ay si raaxo leh ugu safraan. Kaliya kaliya daraasaddeena uma koobnaan doonto isgoysyadaas, waxaan ku sameyn doonnaa daraasadaha dhammaan isgoysyadayada gobolka. ”
Furitaanka Marmaray ayaa fududaynaysa gawaarida gawaarida ee buundooyinka Bosphorus
Eurasia Tunnel ayaa u socota inay qaaddo culeyska taraafiga ee Jasiirada Taariikhda
TCDD wuxuu keenaa Burden of Annealing to Europe Mashruuca BALO
Dhoofinta Turkey ayaa waxa uu wadaa waa warka culus ee badaha
BTK Tareenada Kursi Burburin Dunida leh Wagons Qaran Qaran
Polisan waxay yaraynaysaa kaarboonka "qiyaasta, yareeynta, dheelitirka"